Top 40 Geospatial ee Twitter - Geofumadas
Mee, 2014 Geospatial - GIS, Internet iyo Blogs, egeomates My
Twitter wuxuu u yimid inuu beddelo inta badan soo socda ee aan ku sameyn jirnay quudinta dhaqameed. Waxaa isweydiin mudan sababta ay tan u dhacday, laakiin waxaa laga yaabaa in hal sabab ay tahay wax ku oolnimada wararka wararka ka soo baxa taleefanka gacanta iyo suurtagalnimada in la kala shaandheeyo liisaska ka tagaya waxyaabaha aan danteenna ahayn. Kiiskeyga, waxaan raacayaa anigoo adeegsanaya Flipboard, laakiin ficil ahaan maalin kasta waxyaabaha aan ku arko waxaa ka badan in la sifeeyo xisaabaadka Twitter-ka iyo boggaga qaarkood oo aan ogahay inay la socdaan casriyeysan.
Way cadahay, waxa ku jira Twitterku waxay leeyihiin cimri saacado ah, wax la mid ah joornaal dhaqameedka daabacan; Qofna ma eego waxyaabaha ka socda laba maalmood ka hor oo aada yaamays galay, sidii wargeyskii shalay si dirqi ah loogu isticmaali jiray duubista hilibka iyo daboolida piñatas. Twitter, oo ka duwan Facebook, ayaa leh adeegsi aan shakhsiyan ahayn, oo leh natiijooyin badan oo ku saabsan ogeysiinta wararka; Sidaa awgeed, waxaa aad u adeegsada farshaxan-yahannada iyo ku dhowaad shirkad kasta oo eegta waxa soo socda ee mustaqbalka leh Internet ku saleysan saameyn. Marka la eego daabacaadda baloogyo ku takhasusay mowduuc, mawduucu wali wuu sii soconayaa nolosha, dib ayaa loo cusbooneysiinayaa sida Google ay u muujineyso iyo dib u warshadaynta booqdayaal badan iyo faallooyin Dabcan, hoos u dhaca baloogga ayaa ah in heerka daabicitaanku uu gaabis yahay, taasoo ka dhigeysa inta badan waxyaabaha cusub ama ajaanibta inay aadaan xisaabaadkaaga Twitter. Sidoo kale qaar wax qora oo wax qora ayaa go'aansada in shaygooda uusan aheyn Twitter.
Maanta waxaan rabaa inaan taxo 37 xisaabood oo laxiriira mawduuca geospatial ee aan la socdo, qaar kamid ah ayaan kormeerayay in mudo ah. Waxaan ugu yeeray Gran Cola muuqaal ah oo la sii daayay dhowr maalmood ka hor, iyada oo la tixraacayo tusaalaha ah in adduunkan dijitaalka ah uu ka hor imanayo nidaamka Pareto ee soo jireenka ah, isagoo xisaab kasta ka dhigaya mid u qalma ku darsiga uu ku leeyahay nidaamka deegaanka, halkaasoo qiimaha uusan ahayn alaabada xiddigta laakiin marka la isku geeyo shabakadda caarada oo dhan. Kalabar tani waxay ahayd aragtiyaha fasallada qalaad ee Jaamacadaha, waxaana jira daqiiqad ay weli adag tahay in la fahmo:
Maanta, xisaab sir ah oo aan wax badan sameynin a Tartan, haddii aysan jirin dib u dhac taxane ah Retwits ee u qaybiya wararka shabakada bulshada. Marka laga hadlayo daabacaadda daabacaadda, daabacaad weyn oo daabacan ayaa kaligeed ballaarneyd.
Waxaan horey u qabannay raadinta iyo talosiinta xisaabta, tii ugu dambeysay waxay ahayd sanad uun kahor. Maanta waxaan u isticmaali doonaa isbeddelka jaangooyada, inaan u kala qaado kooxdan ka kooban 37 xisaabood ugu yaraan 5 qaybood, iyadoo la adeegsanayo Maajo 24, 2014 tixraac.In kasta oo liiskan lagu calaamadeeyay diiradda Isbaanishka ee Geofumadas, waxaa ku jira 12 xisaabood oo Ingiriis ah iyo laba af Boortaqiis ah.
Aynu aragno wixii aan ugu yeeray Top 40 ee Geofumadas on Twitter.
Top Geospatial Top, xisaabaadka weyn ee Twitter.
Codsashada qaab jibbaar ah xisaabaadka 37, waxay ka tarjumaysaa isbeddellada isgoyska ee 13,920 raacsan.
4 ee kuwani waxay ka yimaadeen asal ahaan Anglo-Saxon casaan) halka mid ka mid ah asal ahaan Bortuqiis (oo lagu calaamadiyay cagaaran), markaa waxaa jira afar asal ahaan ka soo jeeda Hispanic, in kasta oo aan ka warqabno in injineernimada cas iyo injineernimada 'Blog Engineering' aysan dhab ahaan si gaar ah uga soo jeedin qaybta geospatial-ka, halkaas ayaan u dhigeynaa sababtoo ah waxay calaamad u yihiin xisaabaadka kobcin kara tartan ahaan, sidoo kale Gerson Beltrán oo ka mid ah xisaabaadka yar ee magac shaqsiyeed ku jira liistadan oo dhan.
Dhamaan qeybtan waxay muujinaysaa faraq weyn oo u dhexeeya midba midka kale, oo leh boodboodka ku dhawaad ​​taageerayaasha 20,000, oo ka soo horjeeda kuwa la jaanqaaday garaafka shaxda 7,000.
Xagga kore isbeddellada waxaa ku jira xisaabaad u dhexeeya 10,000 iyo 20,000 raacsan. Adigu si dhib leh ugama badali doontid tan dib-u-eegis mustaqbalka ah oo aan sameyn doono bisha Diseembar:
3. @waxbarasho 13,066
6. @deeqa_daahir 9,519
2 waxay si sax ah u socdaan, si siman looga soocay safka intiisa kale:
Waxyaabaha xiisaha leh ee ku saabsan qaybtan koowaad, sidoo kale, waa baaxadda joornaalada dhijitaalka ah ee lala xiriirinayo dhiirrigelinta dhacdooyinka adduunka, kuwaas oo looga tagayo joornaalada heerka xiga ee dhaqan ahaan u jiray daabacaadda, sida kiisaska GIM International iyo GeoInformatics.
Inta kale ee Tail of Geospatial Accounts
Eeg haddii aan kala xisaab hore, oo cusub ah graphic ee aan kala saari karaa afar kooxood, ka hufan egeomates xisaabta la isbedel yaalana ku dhowaad raacsan 5,000 iga bidix.
Haddii aan u mataleyno isla garaafka qaab qeybin ah, waxaan aragnaa aragti dheeri ah oo ka wakiil ah waxa ku jira ururinta 29 koonto, qaybaha 25% midkiiba, oo aan ugu yeerno Q1, Q2, Q3 iyo Q4:
Q1: xisaabaadka 3
Just 3 25% xisaabaadka wakiil raaca wadareed, isagoo Esri Spain waa account kaliya ee aan ku jiraan software, isagoo tixraac xiiso leh waaxda geospatial.
9. @geysumadas 4,750
10. @IsriishaArman 4,668
Qaybtani waa Geofumadas. Waxay ahayd waayo-aragnimo xiiso leh gaar ahaan, laga bilaabo neceybkeygii ugu horreeyay illaa moodel aanan ku arag aasaas, iyo isbeddelka aan hadda ku aragno jaantusyada soo socda ee FollowerWonk:
Tani waxay ahayd bishii Diseembar 2012, markii aan haysanay hal noodh oo ka weyn 100 qof oo raacsan Meso America iyo mid Isbaanish ka sarreysa 400. Noodhadhka liinta lihi wuxuu u taagan yahay daraasiin iyo noodhadhka buluugga ah ee ka yar 10 qof.
Tani waxay ahayd kahor intaanu gaadhay shabakadda koowaad ee taageerayaasha 1,000, iyo hal kaliya oo Maraykanka ah.
Kani waa khariidada hadda jirta ee kuwa raacsan. Iyada oo leh hal super node Spain, laba Maraykanka, mid Mexico iyo saddex Koonfurta Ameerika, oo ay ku jiraan mid Brazil ku yaal.
Q2: Xisaabaadka 5
Tani 25%, oo ka duwan tii hore, waxay leedahay saddex Anglo-Saxon iyo laba xisaabood oo Isbaanish ah. Tani waxay muujineysaa dib u dhaca kuwa iska indhatirey inay galaan Twitter-ka waqtiga la tilmaamay, in kasta oo ay tixraacyo u yihiin aaladda Anglo-Saxon, sida ay tahay xaaladda Geoinformatics, oo xitaa lumisay fursad ay ku keydiso magaca oo ay ku qaadatay inay hesho Geoinformatics1. Sidoo kale xiisaha leh waa arinta MappingGIS oo ah mid ugub ah laakiin fuulay talaabooyin gardarro ah, iyo koontada Orbemapa ayaa sidoo kale halkan ku taal, taas oo ah mid aan firfircooneyn oo laga yaabo in dib u eegista soo socota ay noqon doonto Q3
14. @maxamedguud 2,668
Iyada oo loo weecinayo koritaanka «aan-sax ahayn«, Kuwaas oo aan keenin waxkabadan xisaab xumo iyo awood yar koontada, sidoo kale waa xiiso in la arko koritaankaas«dabiiciga ah»Barta Twitterka waxay ku leedahay qiyaas qiyaas ahaan ah 25% sanadkii koontooyin aan ka badnayn 10,000 raacsan. Marka, inta ay qaadanayso shirkaddu inay soo gasho «taasi waa inay ku jirtaa Twitter«, Inta dhul aad u badan uu tartankaaga guuleysan doono. Farqiga ayaa sii jiraya illaa iyo inta dadaal xoog leh lagu bixinayo hagaajinta tayada daabacaadda, asalka, iyo joogteynta; sidaas darteed 500 oo raacsan farqiga u dhexeeya koonto iyo xisaab kale ayaa noqon kara mid joogto ah.
Q3: Xisaabaadka 7
Halkan waxaan ku haynaa xisaab asal ahaan ka soo jeeda Boortaqiis, iyo labo kaliya oo asal ahaan ka soo jeeda Anglo-Saxon, joornaalada si sax ah caan ugu ah oo daabacan (Point of Starting and GIM International). Waxaan rajeyneynaa in koontada bulshada ee IGN, oo ah mid aan firfircooneyn, NosoloSIG-na durba way joogtaa, taas oo dhowaanahan laakiin leh koritaan joogto ah.
23. @waddey_ 1,731
Q4: Xisaabaadka 13
Liiskani wuxuu noqon karaa mid aan dhammaad lahayn, oo leh xisaabaadyo u dhexeeya 500 oo raacsan ilaa 1,600. Kaliya labo ayaa loogu talagalay maadooyinka ku jira Ingiriisiga.
24. @gabdhaha 1,643
25. @waddey_ 1,520
26. @mahadansheik 1,511
27. @DHAGEYSO RADIO 1,367
29. @ daahiye1,277
30. @Abdihakin_A 1,259
32. @AbdisalamAato 1,146
35. @Dhaqanow 753
36. @Deeqsi_Deeq 540
37. @DHAGEYSO 430
6 bilood gudahood waxaan ku sameyn doonaa dib u eegis cusub, si aan u aragno waxa dhacay. Waxay u badan tahay in koontooyinka aan ka tagnay loo tixgelin doono inay la wareegaan wadar ahaan 40, jaantuska kaliya wuxuu leeyahay 28 mana ahan 29 sida ku qoran liiska. Xulashadeena ka baxsan xamaasada waxaa sabab u ah xisaabaadka aan si joogta ah ugala socono Geofumadas, sidaa darteed haddii aad ogtahay koonto ka badan 500 oo raacsan oo aad u aragto inay leedahay daabacaad edbin ah ...
Soo jeedinta waa la soo dhaweynayaa!
Halkan waxaad ka arki kartaa liiska Top40 this on Twitter
Post Previous" Hore GIM International. Daabacaadii koowaad ee Isbaanishka
Post Next Inaad noqoto sahamiyuhu waa waayo-aragnimo nololeed.Next »
Hal Jawaab "Twitter 40-ka Geospatial Top"
Óscar Martínez isagu wuxuu leeyahay:
Waad ku mahadsantahay xusuusta @masquesig! Sharaf sharaf leh oo ka muuqda liistadaan.
Hambalyo ku saabsan shaqadaada iyo dhammaan dadka ka dambeeya xisaabyadan. Haddii aad go'aansato inaad raacdo, waxaad xaqiijin kartaa inay kugula socon doonaan taariikhda ugu dambeysa adduunka geospatial.